« Raharaha Villa Elisabeth »: niakatra fampanoavana ny praiminisitra lefitra telo aloha… | NewsMada
Naiditra am-ponja ireo olona telo, anisan’ny voarohirohy tamin’ilay raharaha fivarotana ny Villa Elisabeth, omaly hariva. Anisan’izany ny tale jeneraly teo aloha tao amin’ny sampandraharahan’ny fananan-tany sy ny mpiasa iray tao ihany koa, ary ny ”conservateur”-n’ny fananan-tany Antananarivo Renivohitra. Hanapaka ny momba ny praiminisitra lefitra iray teo aloha, anisan’ny voarohirohirohy amin’ity raharaha ity kosa ny fampanoavana eo anivon’ny Fitsarana Avo (HCJ).
Niverina nipoitra indray koa rehefa nangingina ny « Raharaha Villa Elisabeth ». Niakatra tetsy amin’ny fampanoavana eo anivon’ny Tendro miasahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac) 67 ha ny praiminisitra lefitra teo aloha, nisahana ny fanajariana ny tany.
Na izany aza, hosahanin’ny eo anivon’ny fampanoavana amin’ny Fitsarana avo (HCJ) natao hitsarana ireo mpitondra fanjakana ambony ny fanadihadiana sy ny famotorana io praiminisitra lefitra, tafiditra amin’ny “Raharaha Villa Elisabeth”. Tsy afa-bela fa nidoboka am-ponja vonjimaika (MD) eny Antanimora ny tale jeneraly teo aloha ao amin’ny fananan-tany sy ny mpiara-miasa aminy iray ary koa ny « conservateur » eo anivon’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany Antananarivo Renivohitra.
Mbola ifampitadiavana Ramangasoavina Herilanja Gerald
Mbola ifampitadiavana efa tao anatin’ny roa taona kosa ny tompon’andraikitra « Immobilier », Ramangasoavina Herilanja Gerald. Tsy mbola hita hatramin’izao na efa namoahana didy fampisamborana aza ity mpitantana ny orinasa “ Madaterrain » ity. Anisan’ny tanim-panjakana ity tanàna, anisan’ny nipetrahan’ny filoha teo aloha, ny Pr Zafy Albert ity. Nisy nivarotra anefa izany ny 24 janoary 2014 ary anisan’ny voarohirohy ho tafiditra ao anatin’izany sady nanao sonia izany ny praiminisitra lefitra teo aloha, nisahana ny fanajariana ny tany. Nanao ny fanadihadiana sy nanohy izany hatrany ny Bianco ary izao niafara amin’ny fiakaran’ny raharaha teny amin’ny Pac izao.
Nitory eny amin’ny Bianco ny fanjakana
Tsiahivina fa efa namoahana « arrêté ministériel » manafoana ny famarotana ny domaine Saint Antoine IV eny Amboniloha Ivandry na ny « Villa Elisabeth » ny minisitry ny Fanajariana ny tany ary ny fampitaovana teo aloha, Ramanantsoa Benjamina Ramarcel sy ny minisitrin’ny vola teo aloha, Andriambololona Vonintsalama. « Amin’ny maha filoha teo aloha ny Pr Zafy ny nahazoany io trano io ary an’ ny fanjakàna tanteraka », hoy izy ireo ny oktobra 2017. Nambaran’ireto minisitra roa ireto koa fa hametraka fitarainana eny amin’ny Bianco izy ireo manoloana ny fomba nahafahana nivarotra io tany io.
Kandidà depiote any amin’ny faritra…
Marihina fa kandidà depiote amin’izao fotoana izao ny iray amin’ireo naiditra am-ponja vo njimaika eny Antanimora io. Tombanana ho tsy anisan’ny mpifaninana amin’izany fifidianana izany ny tenany na efa nahavita ny fametrahana ny antontan-taratasy filatsahana aza.
Etsy andaniny, manao antso avo amin’ny rehetra ny Bianco mba hampilaza na hampandre ny mpitandro filaminana manoloana ny didy fampisamborana an-dRamangasoavina Herilanja Gerald.